EKHAYA > IBlog
Isishwankathelo sePalmitoylethanolamide (PEA) Kukho ingxelo yokuba uLawulo lwezoKutya kunye neDrug luvumile ukungenisa isicelo solingo lweklinikhi ukunyanga i-COVID-19 ngokusebenzisa ichiza elenziweyo elingisa isenzo semolekyuli efumaneka kwentsangu. Iyeza elenziweyo, elibizwa ngokuba yi-palmitoylethanolamide (micro PEA), kukholelwa ukuba lisebenza njenge-anti-inflammatory. IPalmitoylethanolamide (PEA) yinto "yendalo ...
Ngaba ufile ngenxa yokuguga? Ewe, ichiza elilwa nokuguga ngokungathandabuzekiyo lolona khetho luthembekileyo lokuguqula iwotshi yakho yebhayiloji. Jonga imiba ebalulekileyo yeNicotinamide Mononucleotide (NMN), indima yayo kwi-senescence, kunye nendlela yokufumana unyango. I-Phcoker ngumenzi oyingcali ukuvelisa iNicotinamide mononucleotide (NMN) powder ngokukhawuleza uthumele umbuzo: Nxibelelana nathi Intshayelelo Ukukhula o ...
Kutheni sifuna iMagnesium? Ngaphambi kokuba singene kwiMagnesium L-Threonate nootropic supplement, unokufuna ukuqonda malunga nomanduleli wayo ophambili. I-Magnesium yimicronutrient ebalulekileyo, ebandakanyeka ngokukuko kwiinkqubo ezininzi zomzimba. Isixhobo sinokubamba ukunciphisa izihlunu kunye nokuphumla, ukuhlanganiswa kweprotheni kunye nemisebenzi ye-neuronal. Ngaphandle koko, ilawula iswekile yegazi kwaye igcina uxinzelelo lwegazi ...
Isishwankathelo seGalantamine Hydrobromide Isishwankathelo seGalantamine hydrobromide sisiyobisi esisetyenziselwa ukunyanga isifo sengqondo esixhalabisayo. IGalantamine ekuqaleni yayikhutshiwe kwisityalo seqhwa iGalantus spp. Isongezelelo segalantamine nangona kunjalo siselkaloid ekumgangatho ophezulu eyenziweyo ngemichiza. Nangona unobangela wesifo se-Alzheimer ungaqondwa kakuhle, kuyaziwa ukuba abantu abanesifo se-Alzheimer ...
I-PRL-8-53 isishwankathelo I-hype ye-PRL-8-53 njengesiyobisi esisebenza ngengqondo emva phaya kwii-1970s zakuqala. UNikolaus Hansl, uprofesa kwiYunivesithi yaseCreighton, wafumanisa ukuba le nootropic ngelixa wayesebenza kwi-aminoethyl meta benzoic acid esters. Ukusukela oko yaqalwa, esi songezelelo senziwe kuvavanyo lokuqala kunye novavanyo lomntu. Uphando lweklinikhi yayilelona bungqina bokuba i-PRL-8-53 yokufunda ...
ICycloastragenol Isishwankathelo seCycloastragenol (CAG) ekwabizwa ngokuba yi-T-65 yinto yendalo ye-tetracyclic triterpenoid efumaneka kwisityalo se-Astragalus membranaceus. Kwafunyanwa okokuqala xa i-Astragalus membranaceus isicatshulwa yayivavanywa ngezithako zayo ezisebenzayo ezineempawu zokulwa ukuguga. I-cycloastragenol inokufumaneka kwi-Astragaloside IV nge-hydrolysis action. I-Astragaloside IV yeyona nto iphambili esebenzayo ...
I-Nicotinamide riboside (NR) kunye ne-nicotinamide riboside (i-Chloride) I-Nicotinamide riboside (NR) i-chloride yindlela eneklorin ye-nicotinamide riboside (NR). 1.Yintoni iNicotinamide Riboside (NR)? I-NR luhlobo lwevithamini B3 okanye i-niacin. I-compound yafunyanwa ngo-1940 njengento yokukhula kwe-H. Influenza. Ekuqaleni kwenkulungwane yama-21, amanqaku ezifundo angangqina ukuba i-NR ingumanduleli weNAD +. Ndi ...
Yintoni iOxiracetam? I-Oxiracetam yenye yezongezo ezindala ze-nootropic ezivela kusapho lwe-racetam. Kwakuyicandelo lesithathu le-racetam emva kwepiracetam kunye ne-aniracetam kwaye yaqala ukuphuhliswa kwii-1970s. I-Oxiracetam sisiphumo esivela kwimichiza ye-racetam yoqobo, ipiracetam. Njengamanye ama-racetam, i-oxiracetam iqulethe i-pyrrolidone kwisiseko sayo. Nangona kunjalo, i-oxiracetam ineqela le-hydroxyl, yiyo loo nto inamandla ngakumbi ...
Yintoni i-9-ME-BC? I-9-Me-BC (9-Methyl-β-carboline) ekwabizwa ngokuba yi-9-MBC yindawo yenoveli ye-nootropic evela kwiqela le-β-carboline. I-Carbolines zivela kusapho lwe-carboline eyahlukileyo. Oku kuthetha ukuba ziveliswa zombini emzimbeni womntu kwaye ziveliswa kwiziqhamo ezithile, inyama ephekiweyo, umsi wecuba kunye nekofu. Ii-β-Carbolines (BCs) zichongiwe njenge-neurotoxic, nangona kunjalo ...